ဆီးဂိမ်း ကွင်းသွင်းခြင်းခတ် ပြိုင်ပွဲအတွက် အမျိုးသမီး အားကစားသမားများ ရွေးချယ် - Yangon Media Group
ဆီးဂိမ်း ကွင်းသွင်းခြင်းခတ် ပြိုင်ပွဲအတွက် အမျိုးသမီး အားကစားသမားများ ရွေးချယ်
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ်ရရှိ နိုင်မည့်ကွင်းသွင်းခြင်းခတ်(hoop takraw) အားကစားနည်းအတွက် အမျိုးသမီးကစားသမားရွေးချယ် ပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ယနေ့ စတင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ (၃ဝ)ကြိမ်မြောက်အရှေ့ တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ(ဆီးဂိမ်း)ကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ၃ဝ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ၁ဝရက်ထိ မနီလာမြို့၊ Clark နှင့် ဆူဘစ်မြို့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အားကစားနည်း(၅၆)မျိုးထည့် သွင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ခြင်း အဖွဲ့ချုပ်မှာ ဆီးဂိမ်းတွင်ထည့် သွင်းကျင်းပမည့် ကွင်းသွင်းခြင်းခတ်(hoop takraw) အားကစားနည်းမှ နိုင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်၍ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ယင်း hoop takraw အတွက် အမျိုးသမီးအား ကစားသမားများ ရွေးချယ်ပွဲကို မေ ၂၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ပိုက်ကျော်ခြင်း အားကစားနည်းလေ့ကျင့်ရေးရုံ၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲမှာ ရွေးချယ်ခံရ သော ကစားသမားများကို နေ ပြည်တော် Gold Camp တွင် စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်အဖွဲ့ချုပ်မှ ပဏာမပိုက်ကျော်ခြင်းကစားသမားများ ဖြစ်သော ထူးအောင်ကျော်၊ သန့်ဇင်ထွန်း၊ ကိုကိုလွင်၊ မောင်ရဲ၊ သက်အောင်၊ မင်းထွဋ်ခိုင်၊ ပိုင်မိုးဦး၊ ဇင်ဘိုဦး၊ ဇင်ကိုကို၊ ဟိန်းလတ်၊ စည်သူအောင်၊ ကျော်မင်းသူ၊ ဇင်မင်းဦး၊ ဝေလင်းအောင်၊ အောင်ပြည့်ထွန်း၊ သန့်ဇင်ဦး၊ ထက်မြတ်သူ၊ အောင်နိုင်ဦး၊ ဇော်မျိုးသူ၊ အောင် မျိုးနိုင်၊ အောင်သူမင်း၊ ကျော်ဇင်လတ်၊ ထွန်းဝဏ္ဏအောင်၊ အောင် ဇော်ဟိန်း၊ မင်းထက်၊ ဉာဏ်လင်းနိုင်၊ ရှိုန်းထက်ကျော်၊ ချစ်ရသူ၊ အေးမင်းနိုင်၊ သောင်းအေး၊ စည်သူထွန်း၊ စုမွန်အောင်၊ စုမြတ်ယဉ်၊ စုမြတ်မိုး၊ ဆုရည်ထက်၊ ဖြူဖြူသန်း၊ နန်းစု မြတ်စံ၊ စုမွန်ကျော်၊ ခင်းနှင်းဝေ၊ အေး အေးသန်း၊ ယမုံဇင်၊ ဝင်းသူဇာ၊ လင်းလင်းပြည့်၊ သီရိအောင်၊ အိအိဖြိုး၊ ဆောင်းဦးဝေ၊ ဇင်မင်းထွေး၊ တိုးရတနာစု၊ ဆုမြတ်လှိုင်တို့အား အုပ်ချုပ်သူနည်းပြ ၁၁ ဦးဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၂၂ ရက်မှစတင်ကာ နေပြည်တော်တွင် စခန်းသွင်းလေ့ကျင့် ပေးနေလျက်ရှိပြီဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်လျှင် ပေါင် ၁၂ ဒသမ ၃ သန်း ရမည့် လစာဖြင့် ဒီလစ်ကို မန်ယူ ကမ်းလှမ်း
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်အသင်း ဆီမီးဖိုင်နယ် ပအကျော့အမီ နောက်ခံလူနှစ်ဦးခေါ်ယူ
ဗြိတိန်ခရီးစဉ်အတွင်း ထရန့်က ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာမေ၏ Brexit အစီအစဉ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်
‘ဇာတိမြေ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် စတင်ပြသခွင့်ရရှိ
အခွန်ဝန်ထမ်းအချို့နှင့် လုပ်ငန်းရှင်အချို့ပေါင်းပြီး အခွန်ရှောင်တိမ်းနေ၊ အကျင့်ပျက် ဝန်??
‘အောင်မြင့်မြတ် က လွဲလို့ လှယဉ်ကျေးတို့ ဘာတို့ အကုန် အခု သရုပ်ဆောင်သစ် ခေါ်တာကို လာလျှောက်ကြ??